Mi 10T Series ရဲ့ဈေးတှထှေကျပျေါလာပွီ — Anycall Mobile
Mi 10T Series ရဲ့ဈေးတှထှေကျပျေါလာပွီ
By liam September 12, 20203Mins Read
အရငျလတုနျးက Xiaomi အနနေဲ့ Xiaomi Mi 10T Series ကို နိုငျငံတကာ ဈေးကှကျမှာမိတျဆကျလာဖို့ စီစဉျနပွေီလို့သတငျးတှထှေကျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီ Mi 10T Series ထဲမှာ Mi 10T Lite ၊ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ပါဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျးဖုနျးတှထှေကျလာဖို့ အခြိနျနီးကပျလာတဲ့နဲ့အမြှ အခုမှာတော့ Mi 10T Pro ရဲ့ ပုံတှနေဲ့ Specs တှေ ထပျပေါကျကွားလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံတှနေဲ့ဈေးတှကေတော့ Amazon Spain Website မှာပျေါထှကျလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ Amazon Spain Website ပျေါကပုံတှအေရ Mi 10T ရဲ့ဈေးဟာ €550 ( မွနျမာငှေ ၈ သိနျး ၇ သောငျး ဝနျးကငျြခနျ့) ၊ Mi 10T Pro ကတော့ €640 ( မွနျမာငှေ ၁၀ သိနျး ၁ သောငျး ဝနျးကငျြခနျ့) ကသြငျ့လာမှာပါ။
ဆိုတော့ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro မှာ ဘယျလို Specs တှပေါလာမလဲ ??
အခုထှကျလာတဲ့ပုံတှအေရ Mi 10 Pro ရဲ့ကြောဘကျမှာ ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံစံ Camera Setup အသဈကို တပျဆငျပေးထားတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒီ Setup ထဲမှာတော့ Main Camera နဲ့အတူ အရံ Camera နှဈလုံးကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။ ကြောဘကျ Design ကတော့ အရောငျနှဈရောငျပွေး Glass Design ကိုသုံးထားတဲ့ပုံပါပဲ။ ဖုနျးရဲ့ရှဘေ့ကျမှာတော့ Selfie အတှကျ Punch-hole အသေးတဈခုကိုတပျဆငျပေးတာကိုတှရေ့မှာပါ။
Volume ခလုတျနဲ့ Power ခလုတျကိုတော့ ဖုနျးရဲ့ညာဘကျမှာတပျဆငျပေးထားတာပါတယျ။ Speakers အပေါကျနဲ့ Type-C Port တို့ကိုတော့ ဖုနျးရဲ့အောကျခွမှောတှလေ့ာရမှာပါ။ 3.5mm နားကွပျပေါကျ ပါလာဖို့ရှိမရှိကိုတော့သခြောမသိရသေးပါဘူး။
Xiaomi Mi 10T Pro မှာ 144Hz Refresh Rate ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ OLED Display ပါလာဖို့ရှိနပေါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ Screen Size ကိုတော့သခြောမသိရသေးပါဘူး။ OLED Display ကွောငျ့ Under-display fingerprint ပါလာနိုငျပမေယျ့လညျး အရငျကသတငျးတှမှောတော့ Under-display ingerprint အစား Side-mounted Fingerprint Sensor ကိုပဲထညျ့ပေးလာမယျလို့သိထားရပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ LCD ကိုမှ 144hz နဲ့ဖွဈလာ မလား ? စဉျးစားစရာပါပဲ…
Camera အတှကျဖုနျးမှာ Triple Camera ကိုတပျဆငျပေးလာမှာပါ။ ဒီ Setup ထဲမှာ 108-Mgapixel Main lens ပါလာဖို့သခြောသလောကျရှိနပေါတယျ။ တဈခွား Camera Sensors နှဈခုရဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုတော့ သခြောမသိရသေးပါဘူး၊။
Performance မှာတော့ Flagship ဖုနျးတျောတျောမြားမြားမှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 865 Chip နဲ့အားဖွညျ့ပေးလာမှာပါ။ ဒီ Chip ကိုတော့ 8GB RAM ၊ 265GB Storage နဲ့ တှဲပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ Battery အတှကျတော့ 5,000 mAh Battery ပါလာဖို့ရှိနပေါတယျ။ Fast Charging ပိုငျးမှာတော့ သခြောအသိအကမြသိရသေးပမေယျ့ 65W ဒါမှမဟုတျ 120 W လောကျပါလာနိုငျပါတယျ။
Mi 10T မှာတော့ Camera ပိုငျးမှာ 108 MP Main Camera အစား 64 MP Main Camera ပါလာမှာကလှဲပွီးကနျြတဲ့ Specs တှကေတော့ Mi 10T Pro နဲ့ တူလာနိုငျပါတယျ။
လောလောဆယျတော့ Mi 10 T ၊ Mi 10T Pro တို့ရဲ့ Specs တှပေဲထှကျထားပါသေးတယျ။ Mi 10T Lite နဲ့ပတျသကျပွီး ဘာသတငျးအစအနမှမထှကျထားသေးပါဘူး။
ဒီ Mi 10T Series ကိုတော့ ဒီနှဈ October ဒါမှမဟုတျ ဒီနှဈကုနျလောကျမှာသာ တှလေ့ာရနိုငျပါတယျ။
Mi 10T Series ရဲ့ဈေးတွေထွက်ပေါ်လာ…
အရင်လတုန်းက Xiaomi အနေနဲ့ Xiaomi Mi 10T Series ကို နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်မှာမိတ်ဆက်လာဖို့ စီစဉ်နေပြီလို့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Mi 10T Series ထဲမှာ Mi 10T Lite ၊ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းဖုန်းတွေထွက်လာဖို့ အချိန်နီးကပ်လာတဲ့နဲ့အမျှ အခုမှာတော့ Mi 10T Pro ရဲ့ ပုံတွေနဲ့ Specs တွေ ထပ်ပေါက်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံတွေနဲ့ဈေးတွေကတော့ Amazon Spain Website မှာပေါ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Amazon Spain Website ပေါ်ကပုံတွေအရ Mi 10T ရဲ့ဈေးဟာ €550 ( မြန်မာငွေ ၈ သိန်း ၇ သောင်း ဝန်းကျင်ခန့်) ၊ Mi 10T Pro ကတော့ €640 ( မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်း ၁ သောင်း ဝန်းကျင်ခန့်) ကျသင့်လာမှာပါ။
ဆိုတော့ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro မှာ ဘယ်လို Specs တွေပါလာမလဲ ??
အခုထွက်လာတဲ့ပုံတွေအရ Mi 10 Pro ရဲ့ကျောဘက်မှာ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံ Camera Setup အသစ်ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီ Setup ထဲမှာတော့ Main Camera နဲ့အတူ အရံ Camera နှစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ကျောဘက် Design ကတော့ အရောင်နှစ်ရောင်ပြေး Glass Design ကိုသုံးထားတဲ့ပုံပါပဲ။ ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတော့ Selfie အတွက် Punch-hole အသေးတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Volume ခလုတ်နဲ့ Power ခလုတ်ကိုတော့ ဖုန်းရဲ့ညာဘက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားတာပါတယ်။ Speakers အပေါက်နဲ့ Type-C Port တို့ကိုတော့ ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတွေ့လာရမှာပါ။ 3.5mm နားကြပ်ပေါက် ပါလာဖို့ရှိမရှိကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူး။
Xiaomi Mi 10T Pro မှာ 144Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ OLED Display ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Screen Size ကိုတော့သေချာမသိရသေးပါဘူး။ OLED Display ကြောင့် Under-display fingerprint ပါလာနိုင်ပေမယ့်လည်း အရင်ကသတင်းတွေမှာတော့ Under-display ingerprint အစား Side-mounted Fingerprint Sensor ကိုပဲထည့်ပေးလာမယ်လို့သိထားရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် LCD ကိုမှ 144hz နဲ့ဖြစ်လာ မလား ? စဉ်းစားစရာပါပဲ…
Camera အတွက်ဖုန်းမှာ Triple Camera ကိုတပ်ဆင်ပေးလာမှာပါ။ ဒီ Setup ထဲမှာ 108-Mgapixel Main lens ပါလာဖို့သေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ တစ်ခြား Camera Sensors နှစ်ခုရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး၊။
Performance မှာတော့ Flagship ဖုန်းတော်တော်များများမှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon 865 Chip နဲ့အားဖြည့်ပေးလာမှာပါ။ ဒီ Chip ကိုတော့ 8GB RAM ၊ 265GB Storage နဲ့ တွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Battery အတွက်တော့ 5,000 mAh Battery ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Fast Charging ပိုင်းမှာတော့ သေချာအသိအကျမသိရသေးပေမယ့် 65W ဒါမှမဟုတ် 120 W လောက်ပါလာနိုင်ပါတယ်။
Mi 10T မှာတော့ Camera ပိုင်းမှာ 108 MP Main Camera အစား 64 MP Main Camera ပါလာမှာကလွှဲပြီးကျန်တဲ့ Specs တွေကတော့ Mi 10T Pro နဲ့ တူလာနိုင်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ Mi 10 T ၊ Mi 10T Pro တို့ရဲ့ Specs တွေပဲထွက်ထားပါသေးတယ်။ Mi 10T Lite နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသတင်းအစအနမှမထွက်ထားသေးပါဘူး။
ဒီ Mi 10T Series ကိုတော့ ဒီနှစ် October ဒါမှမဟုတ် ဒီနှစ်ကုန်လောက်မှာသာ တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
Mi 10T SeriesXiaomi